‘पाँच वर्षपछि निजगढबाट अमेरिका जान सकिन्छ’ - Kathmandu Express
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको ५ महिना भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को तयारी तीब्ररुपमा भइरहेका बेला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि लामो समय रिक्त रहेको मन्त्रालयको नेतृत्व योगेशको काँधमा आएको हो । प्रस्तुत छ भट्टराईसँग एक साक्षात्कारमा गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश–
भ्रमण वर्षको तयारी कसरी गरिरहनुभएको छ ?
विगतमा ५/६ महिना मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएकोले भ्रमण वर्षको तयारीमा केही ढिलाई भएपनि अहिले काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । म आएपछि भ्रमण वर्ष सफल तुल्याउनको लगातार छलफल गरेको छु, यससँग सरोकारवालाहरुसँग पनि धेरै पटक छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको छु ।
बजेटको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भ्रमण वर्षको लागि दश करोड बजेटमात्रै छुट्याइएको यो वर्ष १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । भ्रमण वर्षको लागि २५ करोड बजेट भनेको न्यून हो, अहिले हामीले ६५ करोडको बजेट पास गरेका छौं ।
प्रचार प्रसारलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ?
पर्यटन वर्षको प्रचारको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान छ । सन् २०२० को जनवरी १ तारिखमा भ्रमण वर्षको भव्य शुभारम्भ हुन्छ । यो कार्यक्रम देशभरि नै एकसाथ सुरु हुनेछ । काठमाडौंमा हामीले केही दिनभित्रै ठाउँ घोषणा गर्छौं । दशरथ रंगशाला, सैनिक मञ्चलगायत कहाँ हुन्छ, हामी तोक्छौं । हामीले नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुको आधारमा मैले ४० देशका पर्यटकमन्त्रीहरुलाई निम्तो पठाएको छु । सोही सन्दर्भ पारेर नेपालमा टुरिज्म मिनिष्ट्री कन्क्लेभ पनि आयोजना गरिएको छ । यो कन्क्लेभ ऐतिहासिक हुनेछ । भ्रमण वर्ष सफल तुल्याउनको लागि पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विभिन्न चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरु (कलाकार, खेलाडी) लाई पनि नेपाल भ्रमणको लागि आमन्त्रण गरिएको छ । हामीले विश्वमै चर्चित व्यक्तित्वहरुलाई प्रचासप्रसारको लागि पनि सदभावना दुत बनाएका छौं । उहाँहरुबाट सहयोग लिने क्रम जारी छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न कुटनीतिक नियोगहरुलाई हामीले नेपाल भ्रमण वर्षको भव्य उखघाटन गर्न निर्देशन दिएका छौं । हाम्रा विदेशस्थित नियोगहरुले जनवरी ७ तारिखमा कार्यक्रम गर्नेछन् ।
दूतावासहरुले निर्देशनअनुसार काम गरेका छन् त ?
अब पर्यटन, विकास र आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिनुपर्छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली राजदुतहरुले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । कुन देशबाट नेपाल भ्रमणमा बढि पर्यटकहरु आउनुहुन्छ, त्यो हेरेर हामी ती देशमा रहेका हाम्रो राजदुतहरुलाई पुस्कृत पनि गर्छौं ।
पर्यटक नेपाल आउनलाई के कुराले प्रेरित गर्नुभएको छ ?
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले आकर्षक छुट दिने तयारी गरेको छ । हिमाललाई चढ्नको लागि पनि सुविधा दिने स्किम बनाउँदैछौं । माथिल्लो हिमाली भेगमा जानको लागि पैसा लाग्दथ्यो, त्यसमा पनि छुट दिने तयारी गरेका छौं । भिसा लगाउने कुरामा केही छुट हुन्छ ।
नयाँ पर्यटक गन्तव्यको विषयमा केही सोच्नुभएको छ ?
हामी केही हिमाल आरोहणको लागि खुल्ला गर्ने योजनामा छौं । काठमाडौं आउने पर्यटकहरु सगरमाथा, अन्नपूर्ण, पोखरा, सौराह यही चल्तीका पर्यटक गन्तव्य जानुहुन्छ । हाम्रो जोड यसपटक नयाँ पर्यटक गन्तव्यलाई प्रचार गर्नेतर्फ छ । जुन गन्तव्य भर्जिन छन् । प्राकृतिक रुपमा अत्यन्तै सौन्दर्य छन्, ती गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार गर्नेतर्फ पनि छ ।
विमानस्थलको सुधार र नयाँ विमानस्थलको निर्माणको तयारी के के छ ?
पर्यटन प्रर्वद्धनअन्तर्गत हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने काम भनेको नै विमानस्थलको निर्माण र विस्तार, सेवासुविधा विस्तार गर्ने पर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने हो, यी काम हामीले अहिले द्रुत गतिमा गरिरहेका छौं । अब केही महिनाभित्रै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु हुनेछ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९० प्रतिशत निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब यो अन्तिम तयारीमा छ । उक्त विमानस्थलबाट हवाई सेवा सञ्चालनको लागि (उडानयोग्य) बनाउनको लागि अध्यागमन, भन्सार, एयरलाईन्सका कार्यालय राख्ने, सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नेलगायतका केही महत्वपूर्ण काममात्रै बाँकी छन् । आगामी सन् २०२० को मार्चबाट सेवा सुरु योजना छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालको अर्थतन्त्र धेरै मजबुत हुन्छ । यो सञ्चालनमा आएपछि पश्चिम नेपालमा पर्यटकीय सुविधा थपिनेछ । यहाँका जनताले ठूलो सुविधा पाउनेछन् । लुम्बिनीको प्रर्वद्धन हुनेछ । हामी बृहत्तर लुम्बिनीय गुरुयोजनाअनुसार काम गरिरहेका छौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी सन् २०२१ को जुनमा सकिनुपर्छ । हाम्रो लक्ष्यअनुसार त यही हो, तर अहिले प्राप्त रिपोर्टअनुसार यो लक्ष्यभन्दा ६ महिनाअघि नै सम्पन्न हुनेछ । काठमाडौं एयरपोर्टमा जहाज होल्ड हुने समस्या छ । यो समस्याप्रति म संवेदनशील छु । अपरेशन टिमसँग धेरैपटक बैठक तथा छलफल गरेको छु । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको पूननिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । अहिले यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको छ । अब ट्याक्सी वेको पनि पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुँदैछ । त्रिभुवन विमानस्थलले वार्षिक ७२ लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । यो संख्या भनेको हाम्रो एयरपोर्टले अप्टिमम क्षमतामा आफ्नो सेवा दिइरहेको छ । बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्विकल्प हो । दुई दिनअघिमात्रै पनि म त्यहाँ पुगेर छलफल गरेको छु । निजगढ विमानस्थल बनाउनेबारे गलत प्रचार गरियो । यस्तो गलत प्रचार गर्नु भनेको नेपालमा विकास गर्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसको लागि नेपाली साथीहरु शिकार हुनुभयो । मलाई दुःख लागेको छ । हामी प्राकृतिक सम्पदालाई नियतवश क्षति पुगाउने पक्षमा छैनौं । तर, विकल्प दिएर हामी विकास गर्छौं । एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोप्नुपर्छ । निजगढमा कति रुख काट्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा हामी यही महिनाभित्र तथ्यांक दिन्छौं । २५ लाख रुख काट्ने काम जिन्दगीमा कहिल्यै पनि हुँदैन् । आधीको आधी पनि काट्दैनौं । बरु, आधीको आधीको पनि आधी पनि चाहीँ काटिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्युले सोध्नुभएको छ, मैले पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर छलफल गरिरहेको छु, लगानी बोर्डसँगपनि छलफल गरिरहेको छु । आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढबाट अमेरिका जान सकिन्छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारको काम के के भइरहेको छ ?
निगमलाई व्यवसाय गर्ने र नाफा कमाउने संस्था हो, यसलाई मागी खाने भाँडो बनाउनुहुँदैन् । यसले नाफा कमाउनुपर्छ । अरु एयरलाईन्स नाफामा छन् । तर, निगममात्रै किन घाटामा छ ? म आएपछि मैले यसको व्यवस्थापन टिमलाई सुधारको योजना ल्याउन निर्देशन दिएको छु । सधैं अनुदान दिएर चल्दैन् । आफैं नाफा कमाउनुपर्छ । वार्षिक एक अर्ब त यसले जहाज ओभर ग्राउण्ड भएरले घाटा लागेको छ । मैले यी सबै कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर कडा निर्देशन दिएको छु ।
Previous articleसागको ओलम्पिक टर्च र्‍याली सुरु
Next articleसत्ता जोगाउन उपेन्द्रले बनाए वार्ता टोली